Chelsea Oo 8 Daqiiqadood Saddex Gool Ugu Shubtay Southampton
HomeAfricaWararka Somaliga AhChelsea Oo 8 Daqiiqadood Saddex Gool Ugu Shubtay Southampton
Chelsea ayaa diiwaangashatay guul lama filaan ah kaddib markii ay 3-2 ku jiidhay Southampton oo laba gool kala hormartay.
Olivier Giroud oo beddel lagu soo geliyey daqiiqaddii 61aad ayaa noqday shimbirka guusha u horseeday Chelsea, waxaana uu sagaal daqiiqadood oo kaliya markii uu garoonka ku jiray uu Chelsea u dhaliyey goolka koowaad, kaas oo ahaa madax uu goolhayaha iyo difaaca Southampton si sahal ah u dhaafiyey.
Goolka labaad ee Chelsea ayaa waxa dhaliyey daqiiqaddii 75aad si xarrago leh u dhaliyey halyeyga kooxda Hazard, waxaase saddex daqiiqadood oo kaliya kaddib kusoo laabtay dhalinta goolasha Olivier Giroud oo ciyaarta ka dhigay 2-3.
Bilowga ciyaarta ayaa waxa uu yimid iyadoo uu Morata afka hore u taagan yahay Chelsea, laakiin difaacyahannada Saints ayaa waxba iskaga tirin waayey, waxaana sida daadka u shaqeeyey weerarka iyo khadka dhexe ee Southampton.
Daqiiqaddii 21aad ayaa Southampton ay hoggaanka ciyaarta qabatay, markaas oo gool uu u dhaliyey Tadic, waxaana uu ahaa goolka kaliya ee labada kooxood ku kala baxeen qaybta hore.
Qaybta labaad markii layskugu soo noqday ee ay maraysay daqiiqaddii 60-aad, ayaa ay Southampton u dabbaal-degtay goolka labaad oo uu u saxeexay Bednarek, waxaana ay u qaateen inay gacanta ku dhigeen saddexda dhibcood ee ciyaarta, sarena uga soo ruqaansanayso kaalinta 18aad ee ay dhex fadhido.
Markii ay Southampton heshay labada gool daqiiqaddii 60aad, waxa uu tababare Conte garoonka soo geliyey labada ciyaaryahan ee Giroud iyo Pedro, waxaana uu saaray Morata iyo Zappacosta. Beddelkani wuxuu noqday mid uu ku faa’iiday, waxaana si buuxda ay Chelsea gacanta ugu dhigtay maamulka ciyaarta.
Siddeed daqiiqadood gudahood ayaa ay Chelsea ku heshay saddex gool, waxaana ay kala ahaayeen daqiiqadihii 61aad oo Giroud uu dhaliyey iyo 75aad oo uu Hazard raaciyey iyo 78aad oo Giroud uu guusha gacanta u geliyey kooxdiisa.
Chelsea waxay ku jirtaa kaalinta lixaad oo ay ku hayso 60 dhibcood, waxaanay ka ordaysaa Arsenal oo kaalinta toddobaad fadida, laakiin Southampton ayaa baxar ku jirta, dibna ugu laabanaysa heerka labaad haddii aanay kulamada soo socda guulo gaadhin. Saints waxay leedahay 28 dhibcood, waxaanay ku jirtaa kaalinta 18aad.